म कसरी मुक्त अध्यागमन मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? | कानुनी infromation र स्रोतहरू | USAHello
निःशुल्क कानुनी स्रोतहरू म कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ? निःशुल्क अध्यागमन मद्दत म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्?
तपाईं एक वकील चाहिन्छ? तपाईं अध्यागमन वा आश्रय मद्दत चाहिन्छ? शरणार्थी र आप्रवासी लागि निःशुल्क वा कम लागत कानुनी स्रोतहरू फेला. अध्यागमन ठगी आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने सिक्न.
के गर्छ समर्थक बोनो अर्थ?
एक समर्थक बोनो वकील गर्ने स्वतन्त्र सेवाहरू दिन्छ एक वकील छ. धेरै वकिल एक वकील वा कानुनी स्रोतहरू लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त पैसा नगर्ने शरणार्थी वा मानिसहरूलाई मदत गर्न आफ्नो समय दान हुनेछ. यी निःशुल्क कानुनी सेवा भनिन्छ समर्थक बोनो सेवाहरू.
जो वास्तविक वकील मानिसहरू आफूलाई जोगाउन यो जानकारी पढ्न! त्यहाँ तपाईंलाई मदत गर्न बहाना गर्ने मान्छे हो त्यसैले तिनीहरू आफ्नो पैसा राख्न सक्नुहुन्छ. तिनीहरूलाई कसरी पहिचान र आफैलाई रक्षा गर्न सिक्न! को आप्रवासी कानूनी स्रोत केन्द्र (ILRC) ठगी बाट रक्षा गर्न जानकारी गरे. तिमी सक्छौ पढ्न र जानकारी डाउनलोड अंग्रेजी मा. वा तपाईं पढ्न र जानकारी डाउनलोड स्पेनिस.
समर्थक बोनो कानुनी सेवाहरू म कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ?
Lawhelp.org कानुनी सहायता र जानकारी मुक्त गर्न जडान. यो तपाईं फेला समर्थक बोनो र कम लागत कानुनी सहायता गर्न मद्दत गर्नेछ.
समर्थक बोनो अध्यागमन वकील म कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ?
तपाईं अध्यागमन-सम्बन्धित कुराहरूले मदत गर्न आवश्यक छ भने, यो तपाईं प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने आयात मात्र देखि मदत छ लाइसेन्स वकील वा आधिकारिक प्रतिनिधि. तपाईं आफ्नो साथी वा परिवार मदत माग्न भने, तिनीहरूले गल्ति तपाईं अध्यागमन सेवा संग समस्यामा तपाईं प्राप्त गर्न सक्छ गलत जानकारी बताउन सक्छ.
अमेरिकी आप्रवासन वकील संघ
अमेरिकी आप्रवासन वकील संघ को एक सदस्य हो जो एक वकील फेला.
ImmigrationLawHelp.org LawHelp.org को भाग हो. यसलाई कम आय आप्रवासी कानुनी सहायता फेला पार्न मद्दत गर्छ.
न्याय संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग
आफ्नो राज्य चयन गर्न नक्सा प्रयोग गर्न र आफ्नो राज्य मा प्रो बोनो वकील को एक सूची फेला पार्न.
detained छ जो कसैले लागि कानुनी सहायता म कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ?
राष्ट्रिय आप्रवासन कानूनी सेवा निर्देशिका
नक्सा प्रयोग वा राज्य द्वारा अध्यागमन कानुनी सेवा प्रदायकहरू खोजी गर्न गठन, काउन्टी, वा थुनामा सुविधा. कि मुक्त वा कम लागत अध्यागमन कानुनी सेवा प्रदान मात्र नाफारहित संगठन यस निर्देशिका समावेश छन्.
म मानव तस्करी मद्दत चाहिन्छ
राष्ट्रिय मानव तस्करी हटलाइन
तपाईंलाई थाहा तपाईं वा कसैले मानव तस्करी को शिकार छ भने, तिमी सक्छौ:
वेबसाइटमा प्रत्यक्ष कुराकानी
पाठ "मदत" वा BeFree गर्न "जानकारी" (233733)
help@humantraffickinghotline.org ईमेल पठाउनुहोस्
म मेरो समुदायमा अध्यागमन मदत चाहिन्छ
क्लिनिक आप्रवासी गर्न कानुनी र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने संस्थाहरूको को नेटवर्क छ. तपाईं नजिकै संगठन पाउन आफ्नो निर्देशिका प्रयोग.
तपाईं FindHello तपाईंलाई नजिकै मदतको लागि हेर्न सक्छन्, संयुक्त राज्य अमेरिका मा सेवा र स्रोतको हाम्रो सूची. आफ्नो भाषा चयन. आफ्नो शहर को नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्. त्यसपछि चयन “नागरिकता र अध्यागमन।”
म अर्को देशमा कानुनी सहायता आवश्यक
शरणार्थी कानूनी सहायता सूचना
कार्यक्रम सबै दुनिया भर देशहरूमा निःशुल्क र कम लागत कानुनी सेवा सूची निर्वासनमा मा अधिकार. आफ्नो देशमा निःशुल्क कानुनी सेवा को लागि सूची जाँच.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक शरणार्थी रूपमा आफ्नो अधिकार थाहा
शरणार्थी यात्रा कागजात & अधिकार
परिवार reunification - संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो परिवार ल्याउन
The information on this page comes from the many trusted sources listed here. यो निर्देशन लागि निमित्त र सकेसम्म अक्सर अद्यावधिक. USAHello कानुनी सल्लाह दिन छैन, न त हाम्रो सामाग्री इरादा कुनै पनि कानुनी सल्लाह रूपमा लिइने गरिन्छ. तपाईँलाई नि: शुल्क वा कम लागत वकील वा कानुनी सहायता खोजिरहेको भने, please contact the services on this page.